Taura nesu - FroggyAds Online Kushambadzira Network
Tiri pano kuzopindura yako yakawanda mibvunzo.
Ndingaite Sei Ini Kugadzira Akaundi Ine FroggyAds?
Chii chinonzi Dashibhodhi?
Ndingaite Sei Kuti Ndiite Mushandirapamwe?
Chii chinonzi Mazuva ese kapu padanho reMushandirapamwe?
Ndingaite Sei Kugadzira Kushambadzira?
Ini Ndinogadzira Sei Chirevo Changu?
Ndeapi Matargeting Sarudzo aunotendera?
Ndingaite Sei Ini Kuti Nditsvage Nyika Yakasarudzika Vatakuri?
Haugone Kuwana Mutakuri Wauri Kutsvaga?
Ndeupi Chiteshi Chikamu Iwe Unacho?
Ndeapi Nyika Ane Iwe Ane Traffic Mune?
Ndeapi Nyika Ane Akawanda Vhoriyamu?
Chii Chako Macros?
Ndeapi Ad Ad Units Anowanikwa?
Chii chinonzi Impression Capping?
Zvinorevei nzira yekuendesa "Inokurumidza" kana "Smooth" inorevei?
Chii chinonzi Frequency Capping?
Chii chinonzi SUBIDs uye ndinoishandisa sei?
Ndinga teedzera sei shanduko?
Iwe une mirairo yekushandisa iyo pixel?
Ndinogona here kuvharira matunhu kuitira kuti ma ads angu asaratidze paari?
Ndeapi maKubhadhara aunogamuchira?
Chii chinonzi Minimum Deposit?
Iwe Une A Refund Policy?
Ndeipi Iyo Kubvumidzwa Maitiro Ekubhadhara?
Ndeipi Nzira Yekutendera Yekushambadzira?
Chikonzero chekushambadzira chakarambwa?
Ndingaite Sei Ini Kuvandudza Yangu Akaundi Ruzivo (chinja password)?
Nei Changu Kushambadzira Kusi Kuwana Chero Maonero?
Ndino tarisa Sei Yangu Kubhadhara Nhoroondo?
Ini Ndinodhonza Sei maInvoice Kubva Ipuratifomu?
Chii Chako Chishoma CPM Bhdi?
Chii chinonzi Avhareji Bhidha?
Mitengo Yako Inodhura Here?
Ndingaite Sei Kuti Ndiwedzere Traffic?
Sei Kuuya Kwako Traffic Isiri Kuchinja?
Ndeupi Rudzi rweKuzivisa Waunopa?
Iwe Unopa Kubatanidzwa Kudyidzana?
Iwe unogona kugadzira account pano pa https://premium.froggyads.com/#/signup.	Paunenge iwe waita izvo, iwe unogona kupinda mukati papuratifomu kuti utange kugadzira macampaign, kushambadzira uye kuisa mari.
^ Dzokera kumusoro
Dashibhodhi rako ndiro rako rekutanga peji paunopinda. Yako Dashibhodhi inokutendera iwe kuti uve nepfupiso yeruzivo rwako rwese kubva ku Balance, Yemazuva Ano Spend, Nezuro Spend, Yese Mari, Yese Kubhadhara, Yekupedzisira Kubhadhara, Zviratidzo zvezuva racho.
Pane rako dashboard padyo nepamusoro pane mushandirapamwe tebhu, tinya izvo uye iwe unogona kuwedzera mushandirapamwe mutsva pano. Neimwe nzira pane yako dashboard, kurudyi kwedashboard pasi pe "account overview" iwe uchaona "NEW" inodonhedza bhatani, tinya izvo uye wobva wadzvanya "Campaign".
* Iwe unozofanirwa kugadzira mushandirapamwe usati wagadzira Kushambadzira *
Ichi chiitiko chinofanirwa kushandiswa chete kana iwe uchida kuseta zvinowoneka cap kune ese mushandirapamwe. Kana mushandirapamwe wasvika pane cap yekufungidzira, mushandirapamwe unomira. Iwe zvakare une kugona kuseta zvinowoneka cap pamushambadziro, unonyanya kushandiswa. Chinangwa cheichi chiitiko ndechekuti kana semuenzaniso, une gumi ekushambadzira mumushandirapamwe, uye iwe unoda mune yakazara chiuru chezviuru zvisineyi zvisinei kuti ndeapi ma ads anoshambadza akawanda kana kwete, saka iwe waizogadza chiuru chimwechete sekapu yemushandirapamwe. Nekudaro kana iwe uchida kuti shambadziro yega yega ishandise zvakaenzana zviuru zana zvinowoneka (gumi kushambadza, izvo zvinowedzera kusvika chiuru chimwe chiuru) saka panzvimbo pezvo waisazogadza chivharo chekuratidzira padanho remushandirapamwe asi kumisikidza ratidziro chivharo pamushambadziro.
Unofanirwa kunge watanga mushandirapamwe usati wagadzira kushambadza. Zviziviso zvakagadzirwa mukati memakampeni. Pane rako dashibhodhi padanho repamusoro tinya Campaigns, wobva wadzvanya mushandirapamwe, uye kubva ipapo unogona kugadzira kushambadza. Neimwe nzira iwe unogona zvakare kugadzira maAdverts matsva kubva kune yako dashboard, kurudyi kwedashboard pasi pe "account overview", iwe uchaona "NEW" inodonhedza bhatani, tinya izvo uye wobaya "Advert".
Iwe une mukana wekubatanidza yako ese Mushandirapamwe uye Kushambadzira. Nekuumbiridza, izvi zvinokuchengetedza nguva nekugadzira kushambadza ine chaiyo yakafanana marongero / kunongedza sarudzo. Iwe unokwanisa kugona kutsiva iyo yekugadzira kana ma tag, mune chiitiko iwe chaunoda kuumbika kuti uchengete zvakafanana zvinongedzo marongero asi uchida kuishandisa kune nyowani yekushambadzira yekugadzira.
Ex: izvi zvakanaka kune nguva dzaunoda kupatsanura bvunzo pakati pe "PopUp" uye "PopUnder". Muchiitiko ichocho kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchizoita
Nguva Inotarisa Mutakuri Targeting
Desktop kana Nhare
Unogona kushandisa Google kana mamwe mainjini ekutsvaga kuti uwane ese anotakura ari mune imwe nyika kuti uwane rondedzero yakazara.
Edza Google kana mamwe mainjini ekutsvaga uye uone kana iye mutakuri ane mamwe mazita, akadai pazasi ese makambani akafanana, asi isu hatina Telcel yakanyorwa mupuratifomu yedu.
run-of-network - Haigone kugamuchira chero hupombwe, hunokwezva pabonde, 18+ zvemukati / zvekugadzira, kurodha (flash / java kugadzirisa) kushambadzira.
munhu mukuru - Webhusaiti yevakuru, inogamuchira zvese zvevakuru uye zvakakurisa kushambadza.
software - Inogamuchira zvese.
Traffic munyika dzinopfuura 196.
Hatigone kupa chakaringana huwandu sezvo vhoriyamu / traffic inogara ichichinja. Kana yako bhizimusi iri yemakwikwi zvakakwana vhoriyamu haisi nyaya.
Ndokumbira kuti uone pazasi runyorwa rwemacros edu, iwe uchaonawo ese aya macros akanyorwa mune yevhisheni yekugadzira peji
[CLICK_ID] - inodzosera yakasarudzika kodhi ID
[MACMD5] - inodzosera Mac MD5 hash
[IFA] - inodzosera chishandiso IFA
[PUB_IAB_CAT] - inodzosera iyo muparidzi IAB chikamu
[HTTP_REFERRER] - inodzosera HTTP inonongedzera yemushanyi
[DOMAIN] - inodzosera zita rezita
[IMPRESSION_ID] - inodzosera yakasarudzika ID ID
[USER_ID] - inodzosera yakasarudzika ID yemushanyi
[WINNING_PRICE] - inodzosera mutengo unohwina wekufungidzira
[CAMPAIGN_ID] - inodzosera yakasarudzika ID yemushandira mune yedu system
[CREATIVE_ID] - inodzosera yakasarudzika yekugadzira ID mune yedu system
[SSP_ID] - inodzosera yakasarudzika SSP ID
[PUBLISHER_ID] - inodzosera yakasarudzika ID yemuparidzi iyo inogona kuve neakawanda mawebhusaiti
[SITE_ID] - inodzosera yakasarudzika webhusaiti ID
[PLACEMENT_ID] - inodzosera yakasarudzika yekushambadzira ID
[NYIKA] - inodzosera zita renyika
[SOURCE_ID] - inodzosera yakasarudzika ID ye traffic traffic ine muparidzi ID + ":" + saiti ID + ":" + yekuisa ID
[MASHOKO ANOKOSHA] - inodzosera iro kiyi (kana iripo)
[UNENCODED_CLICK_REDIRECT] - Inodzosera isina kunyoreswa tinya redirect
[ENCODED_CLICK_REDIRECT] - Inodzosera yakadzvanywa penya redirect
[DBL - ENCODED_CLICK_REDIRECT] - Inodzosera zvakapetwa kaviri pakodhi redirect
[RANDOM_NUMBER] - Inodzosera isina kujairika nhamba
[BID_ID] - Inodzosera yakasarudzika bid ID
Ndokumbira upfuure tinya ID - [CLICK_ID] - mune imwe yeanowanikwa maUTM parameter kudzivirira kudzvanya musiyano.
Semuenzaniso: http://domain.com/?utm_source= [SOURCE_ID ]&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsp&utm_content= [CLICK_ID]
Ose Masikirwo Ekuratidzira Banner Ads
Mazuva ese Impression Cap: Ichi chimiro chinomisa kuendesa pane "Kushambadzira" kana iyo kapu yasangana uye yotangazve pazuva rinotevera (sekuvharwa kwekapu zuva nezuva).
Iyi ndiyo algorithm yekuti ungaendesa sei zvaunofunga kune ako kushambadza, ndapota ona pazasi tsananguro;
Speedy - Nunura nekukurumidza sezvazvinogona
Smooth - Zvakaenzana zvinounza zvimiro mukati mezuva rese, inofanirwa kuve neinowoneka zuva nezuva cap ye100,000 kana yakakwira.
Ichi chimiro ndechekuvhara huwandu hwenguva iyo mushandisi achaona kushambadzira kwako mukati menguva yenguva. Iyo inonyanya kushandiswa ndeye 1/24 zvinoreva kuti mushandisi anozoona chete kushambadza kwako kamwe paawa makumi maviri nemana hwaro.
SUBIDs ndiyo inobvumidza iwe kukwidzirisa mishandirapamwe yako, yega SUBID inomiririra webhusaiti inova chikamu cheedu network uko kuratidzwa kwako kushambadziro. Unogona kudhonza mishumo papuratifomu yedu kuti uone kuti ndeipi SUBID iri kukuunzira shanduko, uye ndeapi asiri. Kubva ipapo iwe unokwanisa kuchenesa kana kunyora mazita eSUBIDs ayo anotendera iwe kuwedzera mari yako pane zvauri kuitirwa iwe.
Iwe unogona kushandisa chero pikicha yemufananidzo kana S2S (server-to-server pixel) kuteedzera shanduko.
Hongu iwe unowana edu ekumisikidza maficha mune yako yekugamuchira e-mail
Hongu mune yeproport yezvivakwa peji iwe unokwanisa kuwedzera domains kuvharira, saka kushambadza kwako hakuratidzike pane idzi domains.
Isu tinogamuchira ese marudzi emaCredit Cards, WebMoney, PayPal kana Bank Wire kubhadhara.
Hongu tinoita, ndokumbira utumire chikumbiro kubva papuratifomu uye kudzoreredzwa kuchapihwa mukati memazuva gumi nemana, kudzokera kuakaundi yako yePayPal.
Paunobhadhara pachikuva chedu vanobvumidzwa mukati maawa makumi maviri nemana (kazhinji zvinokurumidza). Nezve Wire Transfers sezvo paine kunonoka kwakawanda kwatiri kuti tigamuchire mari, iyo nguva yatino simbisa iyo mari kumagumo edu ichawedzerwa kune yako balance muaccount yako.
Zviziviso zvinotenderwa kana kurambwa mukati memaawa makumi maviri nemana, kazhinji zvinokurumidza kupfuura izvozvo. Chero bedzi ivo vachigara nemitemo yedu, ivo vanozotenderwa.
Icho chikonzero cheshambadziro chakarambidzwa kumhanya pane yedu network chingave chezvikonzero zvakasiyana. Isu tinotarisawo ako marongero ekutarisa, mitengo yemabhidha, kuona kuti inotaridzika zvakanaka, sezvo isu tisingade kuti utambise mari yako nekuti iwe waisa zvisirizvo zvisirizvo! Kana kushambadza kwako kuchinge kwarambidzwa uchawana chikonzero chacho, asi zvimwe zvezvikonzero zvakajairika ndezvekuti
Kwete kuteerera kune edu mamiriro uye mamiriro
Shambadziro haina kutakura zvakanaka, isina chinhu kushambadzira
Shambadziro iri kunanga isiriyo chiteshi / chikamu, senge yevakuru kushambadzira inotarisa kumhanya-kwe-network
Targeting haina kusarudzwa
Paunopinda papuratifomu kumusoro kurudyi kune tebhu inonzi "Akaunti" tinya izvo uye izvi zvinokutendera kuti uvandudze ruzivo rwako.
Ndokumbira utarise zvinhu zvinotevera zveshambadziro papuratifomu, sezvo zviri zvikonzero nei kushambadza kusinga gashirire;
Ita shuwa kuti "kushingaira" kunoongororwa pane zvekushambadzira marongero
Tarisa tarisiro yekutarisisa (yekutarisa nguva)
Akaundi yako haina kukwana zvakakwana
Kutanga zuva rinogona kusetwa remangwana ramangwana
Bhidha reti yakanyanya kuderera
Kana pasina chimwe cheizvi chinoshanda, ndokumbira utitumire meseji kuburikidza nerutsigiro kuti tikwanise kukutaririra.
Mukupinda kwako padyo nepamusoro pane tebhu inonzi "Kubhadhara" tinya pano, uye iwe uchaona yako nhoroondo yekubhadhara pamwe nekukwanisa kukwidza kumusoro.
Mukupinda kwako pamwe nechepamusoro pane tebhu inonzi "Kubhadhara" tinya pano, uye iwe unozogona kudhonza ma invoice kubva pano.
Iko kushomeka bhidhi kunoenderana kana iri bhenji kana izere peji kushambadza, uye nyika iwe yauri kunanga. Iwe unogona kuona iwo mashoma mabhii pane peji rekugadzira peji.
Wepakati bhidha inochinja kazhinji saka hapana mhinduro yakajeka yatinogona kupa pano. Kana iwe uchida hesheni, iwe unofanirwa kukwidza iyo bhidha kuti uwane yakawanda traffic uye nani kutenderera iyo inogona kuburitsa yakakwira mhedzisiro.
Isu tiri chikuva chemigwagwa chinoshanda pane modhi yekubhidha. Uri kukwikwidzana nevamwe vatengi, saka mitengo yacho yese yakatemwa zvichibva nevamwe vashambadzi. Kana ivo vari kubhida kumusoro, iwe unofanirwa kukwikwidzana nevatengi kuti uwane traffic, kana vakabhidha pasi saka mabidha ako anogona kunge akaderera.
Kana usiri kugashira huwandu hwetraffic iwe hwaunoda, edza kuwedzera yako CPM mwero, sezvo bhidha rako reti rinogona kunge rakanyanya kuderera uye nekudaro vamwe vatengi vari kukwikwidza kumusoro uye kuhwina traffic.
Kune misiyano yakawanda nei traffic isingatendeuke. Tine nzvimbo yekutengesa neyekunze yekuongorora iyo inovhara kunze kwehunyengeri traffic, uye isu tinopa zano vatengi vedu kuti vashandise vechitatu mapato mapato ekuongorora kuti vabatsire kuona kana traffic iri pamutemo. Chero bedzi traffic iri pamutemo kupfuura isu tisingapi mhosva traffic traffic kana chikuva pasina shanduko. Pazasi pane zvakajairika zvikonzero nei usiri kuona shanduko
Peji rako rekushambadzira rine zvikanganiso uye nekudaro vashandisi havagone kupedzisa
Wedzera chiyero chebhidha, sevamwe vatengi vangave vachimhanyisa zvakafanana kushambadzira uye kuita kuti mushandisi aone kushambadza kwavo kutanga, nekudaro kutendeuka kunoenda kwavari pachinzvimbo chako
Shandisa yedu yekuzivisa system kubatsira kuona masosi ari kushanda nekukwirisa kuti uwane mhinduro dzakanakisa.
Yedu yakasimba yekuzivisa system inokutendera iwe kudhonza yakakwira nhanho kune yakanyatso tsanangurwa mishumo zviri nyore. Iko kutaurisa zvakare kuri chaiko-nguva.
Kwete ndine hurombo.
Hofisi yedu yemusoro iri muAarhus / Tilst, Denmark.